Scooter - istaraatiijiyad ikhtiyaar u ah bilowga | vfxAlert official blog
Scooter - istaraatiijiyad ikhtiyaar u ah bilowga
Istaraatiijiyadda «Scooter» waa farsamo ganacsi oo faa'iido leh oo fudud oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah. Tani way u fiicantahay bilowga - calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee lagu kalsoon yahay waxay keenaan faa'iido joogto ah oo ku saabsan isbeddellada muddada-gaaban.
Celcelis ahaan seddex jibbaar (EMA) oo leh xilliyo 10, 20 iyo 30 ah . Go'aamiso jihada isbeddelka muddada-gaaban iyo muddada-dhexe. On biibiile leh isbeddel sarreeya, waxaad isticmaali kartaa kanaalka qiimaha, gudaha aad ku dhex ganacsan karto (ugu yaraan 10-15 dhibcood ballaaran). Burburku wuxuu noqon doonaa calaamad binary ah oo isbeddel cusub ah. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
EMA (20) iyo EMA (30) waxaa loo tixgaliyaa inay yihiin “celcelis ahaan” celcelis ahaan dhaqaaqitaan kuwaas oo jihada isbeddelku go’aaminayo, EMA (5) waxay noqon doontaa «dhakhso» celcelis dhaqaaq iyo calaamadda ugu horreysa ee furitaanka ikhtiyaarka. Celcelis dheer oo shaxda ah ayaa lagu muujiyey hal midab.
Laba MACD (12,26,9) iyo (50,75,9). Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar.
Ganacsiga calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah :
Ikhtiyaar CALL. Celceliska dhaqsaha badan ee dhaqaaqa wuxuu ka talaabayaa hoos celceliska celceliska qunyar socodka ah iyadoo ay xaqiijinayaan labo tilmaamood oo ah MACD (hal ama in ka badan oo baararka ah waa inay ka sarreeyaan xariiqyada eber).
Dooro door. Celceliska dhaqsaha badan ee iskutallaabtu wuxuu ka gudbaa kor ilaa hoos celcelis ahaan celceliska qunyar socodka ah oo leh xaqiijin khasab ah oo ku saabsan histogaraam ee MACD (hal ama in kabadan oo baararka ah waa inay ka hooseeyaan khadka dhexe).
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary . Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii ay tahay waqti shaqeed la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Istaraatiijiyaddan, «tartiib tartiib» celceliska dhaqdhaqaaqa, marka laga reebo xaqiijinta calaamadaha, u shaqee sidii filterka isbeddelka. Haddii qiimaha feerayo laba dhaqaaq, iyo dhakhso EMA (10) - kaliya hal, macaamilku ma furmayo xitaa haddii RSI ay jirto xaqiijin. Sidaa darteed, waxaan haysannaa difaac dheeri ah oo ka dhan ah «buuqa» suuqa iyo leexashada beenta ah.
Waqtiga uu dhacayo. Eeg inaad waddo koorso dhexe : aad u gaaban (1-2 daqiiqo) iyo aad u dheer (10-15 daqiiqo) ikhtiyaarka nolosha ayaa loo arkaa inay khatar tahay. Xaaladda kowaad, qiimuhu wuxuu halis u yahay «waqti la'aan» inuu u maro jihada saxda ah - waxaan helnay khasaaro. Tan labaad, suuqa wuxuu heli doonaa waqti uu ku soo jeesto, taas oo mar labaad siisa natiijo xun.
Haddii dallaalku uu suurtogal ka dhigo in la xiro ikhtiyaarka ka hor inta uusan dhicin, waan sameynaa (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ka soo horjeedka - soo noqnoqoshada celceliska celceliska celceliska qunyar socodka ah ama shaxda RSI waxay bedeshay jihada qaraabada .
Ka dib isbeddello xooggan , RSI, sida wax kale oo badan oo oscillator ah oo xad dhaaf ah, ayaa "cabi kara" muddo dheer aagagga muhiimka ah ama ku dhow heerka 50, adigoon ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, EMA waxay siin kartaa calaamado adag oo lagu kala dooran karo. Si aad u qaadato calaamadaha noocaas ah si aad u shaqeyso ama, maahan in qof kastaa go'aan ka gaaro naftiisa, laakiin weli, waxaa fiican in bilowga ah ay sugaan goob gebi ahaanba laga soo galo, sida ku cad istiraatiijiyadda «Scooter» ay ku saabsan tahay 70-75% fursadaha ikhtiyaariga ah ee guuleysta signalada .